🥇 ▷ Konami wuxuu ku laaban doonaa IP-keeda caanka ah adduunka ✅
Konami wuxuu ku laaban doonaa IP-keeda caanka ah adduunka
Ka dib markii la bilaabay “Metal Gear Solid 5”: Xanuunka Phantom ee 2015, Konami uma uusan bandhigin ciyaar IP ballaaran oo loogu talagalay mashiinka bulshada, oo dhaafsiisan barnaamijyadeeda sanadlaha ah ee barnaamijka Pro Evolution sagaal (oo loogu magac daray sanadkaan cinwaanka EFootball PES 2020) ama ciyaaraha safka labaad sida Metal Gear Survive. Dib-u-habeyntii ay ku sameysay shirkadda dhowr sano ka hor, soo-bandhigyadeeda waxay diiradda saareen sidii ay u daryeeli lahaayeen mashiinnada cayaaraha fudud ee Japan, iyo sidoo kale ka-faa’iideysiga cayaaraha laga soo qaatay cayaaraha sannadlaha ah ee kor ku xusan, iyo sidoo kale cayaaraha saacadaha shaqada ee Yu-Gi franchise -Oh. , baajinta iyadoo la raacayo ciyaaraha sida Silent Hill.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jiraan ciyaaro yaryar oo kaladuwan ah oo Konami ay u soo bandhigtay dadweynaha console sannadihii ugu dambeeyay, guushiisii ​​dhaqaale ayaa dib u soo kicisay, wax micno u noqon kara ku soo laabashada dunida ee consoles oo leh ciyaaro fiidiyoow miisaaniyadeed ballaaran sida Silent Hill, oo ah mid ka mid ah xiddigeheeda wareega, maadaama aan la kulanay shalay, Konami wuxuu diiwaangaliyay ciyaar cusub oo taxane ah oo ku xiran Buugga xusuusinta.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaan tixgalinaa ereyada madaxweynaha Konami Yurub, Masami Saso, uu goor dhaweyd wareysi la yeeshay GameIndustry, halkaas oo uu ku sheegay in muddo ka badan ku shaqeyn doonaan iyaga «IP adduunka oo dhan looga yaqaan».
Xitaa marka la bilaabayo aalado cusub, waxaan aaminsanahay in ciyaarta qalabka lagu ciyaaro ee aadka u sareysa ay yihiin kuwa ugu muhiimsan. Waxaan kula tartameynaa fikradaha hal-abuurka ah iyo teknolojiyada gudahooda ciyaaraha kumbuyuutareedka oo aan u adeegsannaa aaladaha kale, marka waxaan sii wadi doonaa inaan ku dadaalno sidii aan uheleyno barnaamijyadeena console.
Waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan kordhinno boorsadayada. Marka lagu daro cinwaannada aagag badan oo ay ka mid yihiin PES iyo Yu-Gi-Oh, waxaan qorsheyneynaa inaan ka shaqeyno mashaariicda leh IPs kale ee loo yaqaan adduunka oo dhan mustaqbalka dhow.
Konami EFootball 2020 ayaa la sii dayn doonaa Sebtember 10, halka Contra: Rogue Corps sidoo kale la sii deyn doono isla bishaas. Waxaan rajeyneynaa in laga soo bilaabo Konami Waxay ku talo jiraan inay dib u soo celiyaan ciyaarihii loo yaqaan ‘franchise’ sidoo kale loo yaqaan ‘Metal Gear Solid’ ama Silent Hill.